Ny marika voalohany momba ny fitondrana vohoka alohan'ny fotoana
bevohoka / From Poster
Ny marika voalohany momba ny fitondrana vohoka alohan'ny fijanonan'ny fotoana fiterrana Ny vehivavy dia mianatra momba ny fisian'ny vohoka rehefa mitranga ny fadimbolana. Tsy isalasalana fa vita ny fitsapana. Nefa ankoatra izany, misy marika maromaro izay ahafahan'ny vehivavy mamaritra fa ny fahaterahan'ny fiainam-baovao dia manomboka ao amin'ny vatany. Mipoitra sy tebiteby. Hatramin'ny maraina, mitombo tsikelikely ny discomfort ao amin'ny vatana amin'ny endriky ny fihinana, noho ny fiovana ...
Ny marika voalohany momba ny fitondrana vohoka alohan'ny fotoana Read full »
Ahoana no hanarahana ny nifiny mandritra ny fitondrana vohoka
bevohoka, fahasalamana, Ny fahasalaman'i Neny / From Poster
Ny fitomboan'ny zaza dia miaraka amin'ny famerenana indray ny vatan'ny vehivavy. Ambonin'izany, rehefa mitombo ny fitomboan'ny vohoka dia mitombo ny fiovan'ny vatany. Ny fanavaozana ao amin'ny vatana manontolo dia maneho ny fisehony amin'ny rafi-tsosialy. Izany dia ilaina amin'ny fananana hevitra mikasika ny zavatra rehetra mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiterahana ny vehivavy bevohoka sy ny foetus. Ny nify marary dia faharatsiana lehibe izay ...
Ahoana no hanarahana ny nifiny mandritra ny fitondrana vohoka Read full »
Efatra efatra amin'ny vohoka
bevohoka, Ny fahasalaman'i Neny / From Poster
Saika ny vehivavy rehetra ao anatin'ny taona marina, rehefa fantatrao fa bevohoka izy, dia mihomehy ity vaovao ity miaraka amin'ny tsiky mahafaly. Ho an'ny andro vitsivitsy voalohany, ny renim-pirahalahiana dia faly amin'ny fahatsiarovan-tena ny toerana misy azy. Milaza izany amin'ny havana aman-tsakaizany izy, mihaino ny fahatsapana fihetseham-pon'ny reny, ary tonga tampoka ao amin'ny toeram-pivarotana ho an'ny akanjon'ny voaloham-bokony voalohany, dia mahatsapa ho tsy misy dikany. Sambany vao vehivavy iray no mahatsapa ...
Efatra efatra amin'ny vohoka Read full »
Mba hanamarinana ny mety hitrangan'ny fitondrana vohoka eo amin'ny ambaratonga voalohany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anareo ny fambara voalohany momba ny fitondrana vohoka ianao amin'ny fanombantombanana ny fisehoany. Ny fampitahana mahazatra ny famantarana ny maha-bevohoka anay dia manome anao fahafahana hizaha toetra ny tenanao marina. Ny fahatsapana tsy manam-paharoa toy izany ao anatin'ny taova kely dia tsy manan-tsahala amin'ny zava-drehetra, ary ny vehivavy rehetra dia tokony hiaina izany. Matetika izy ireo no mieritreritra fa rehefa bevohoka izy ireo ...
Mba hanamarinana ny mety hitrangan'ny fitondrana vohoka eo amin'ny ambaratonga voalohany. Read full »
Matahotra ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana aho, sa ara-dalàna izany? Ahoana ny fomba hanesorana ny tahotra sy ny tsy hatahotra ny bevohoka sy ny fiterahana: toro-hevitra momba ny psikology sy ny dokotera
Ny fiterahana sy ny fiterahana - ny zava-nitranga lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'ny vehivavy. Dimampolo volana, mahagaga izy mahita ny fivelaran'ny fiainam-baovao ao aminy, mihaino amim-pifaliana ny tenany, mitaintaina miandry ny fahagagan'ny zaza. Ny fifaliana, ny fanantenana, ny tsy faharetana, ny faniriana hamongotra ny peniny amin'ny tratra - ny fihetseham-po toy izany dia ny andro sy ny alina amin'ny reny hoavy. Nefa amin'ny fanantenana mahafinaritra, matetika ...
Matahotra ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana aho, sa ara-dalàna izany? Ahoana ny fomba hanesorana ny tahotra sy ny tsy hatahotra ny bevohoka sy ny fiterahana: toro-hevitra momba ny psikology sy ny dokotera Read full »
Ny fahantrana aorian'ny 30: mamadika ny tadiavina ho toy ny virtoaly iray. Ahoana ny fiovan'ny taona, dia ho bevohoka ny taona 30
Nandritra ny folo taona lasa, nitombo avo roa heny ny isan'ireo vehivavy bevohoka tamin'ny taonan'ny "30". Tsy toy ny roapolo taona lasa izay, ny vehivavy dia heverina ho efa antitra noho ny 40 miaraka amin'ny maha-vavy ny vehivavy voalohany. Inona no nahatonga izany fiovana izany nandritra ny vanim-potoana tsy mahagaga raha takatrao. Nandeha lavitra ny fitsaboana, amin'izao fotoana izao ny vehivavy iray izay efa noheverina fa tsy mahalala dia afaka manana zanaka mihoatra ny iray. Dokotera ...
Ny fahantrana aorian'ny 30: mamadika ny tadiavina ho toy ny virtoaly iray. Ahoana ny fiovan'ny taona, dia ho bevohoka ny taona 30 Read full »
Ahoana no hanavahana ny fifanoherana tena izy mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny diso? Fihetsik'ireo ady mandritra ny fitondrana vohoka
Amin'ny fotoana hahatongavan'ny zazakely, ny ankamaroan'ny reny dia efa vonona tanteraka. Nomanina ny fanafody ilaina, nanangona ny fananany sy ny akanjon'izy ireo kely, ny tahirin-tsoratra sy ny firaketana dokotera. Ny sasany dia nanandrana namorona efitrano iray kanto sy tsara tarehy, mba hividy ny kilalao tsara indrindra. Ny fotoana faratampon'ny maha-bevohoka dia tsy azo ihodivirana tampoka ary ny zavatra rehetra dia vonona amin'ny endriky ny sombiny. Ary ny akaiky kokoa an'ity fotoana ity, ilay Mommy mampatahotra indrindra. ...
Ahoana no hanavahana ny fifanoherana tena izy mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny diso? Fihetsik'ireo ady mandritra ny fitondrana vohoka Read full »